Dhegeyso:Dilal xalay ka dhacay Bosaaso iyo Galkacyo iyo Booliska Puntland oo ka hadlay – Radio Daljir
Juunyo 2, 2015 5:03 b 0
Talaado, Juun 02, 2015 (Daljir) —Taliyaha guud ee ciidamada Booliska Puntland Gen.Maxamed Siciid Jaqanaf oo warbaahinta la hadlay aya ka warbixiyey dilal habeenimadi xalay ka dhacay magalooyinka Galkacayo ee Boosaaso ee xarumaha gobollada Bari iyo Mudug,waxana uu sheegay in ciidamada Ammaanku ku raad joogaan dadka ka danbeeyey dilalkan.
Genaraal Jaqanaf aya sheegay in xalay magalada Galkacayo koox hubaysani ku dishay qof ra,id ah,waxana uu intaasi raaciyey in dadki dilka gaystay u baxsadeen xaafadaha dhinaca Koonfureed ee ayka arrimiyaan maamulka Galmudug.
Taliyaha Booliska aya dhinaca kale sheegay in qof waardiye ah xalay lagu dilay magalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ,laamaha Ammaankuna ku raad-joogaan cidi ka danbaysay falkaasi.
Genaraal Maxamed Siciid Jaqanaf,aya tilmaamay in ciidamada Amaanku howl-gali Amniga lagu xaqiijinayo ka wadaan guud ahaan deegaanada Puntland.
Ugu dambayntiina taliyaha ciidamada booliska dowladda Puntland oo ay weheliyeen taliyaha qaybta gobolka Nugaal ayaa safaro shaqo kutegey magaalada Qadiimig ah ee Eyl ee xeebta gobolka Nugaal, waxaana ay Hay’ada UNDP kala wareegeen Saldhig ay halkaas kadhistay.
Dhegeyso codka Taliyaha.
M/weyne Xassan oo ka qayb-gelaya caleema saarka hogaamiyaha dalka Sudan